★မြန်မာ့အလင်း★: အမေရိကန်က ကုလားကိုချနေချိန် ကျုပ်တို့က စဉ်းစားရမည်
အမေရိကန်က ကုလားကိုချနေချိန် ကျုပ်တို့က စဉ်းစားရမည်
ကုလားတွေမွတ်ဆလင်ဖြစ်လာတဲ့ သမိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အာရပ်တွေက မတရား စစ်တိုက်တယ်။ စစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကုလားတွေကို ကျွန်အဖြစ် သိမ်းပိုက်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ကုလားတွေကို ခြေဖြတ်၊ လက်ဖြတ်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြစ်ခဲ့တာပါ။ ကုလားတွေရှေ့မှာ ကျွန်ကုလားမကြီးတွေကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး စအိုကနေ မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အရှက်ခွဲခဲ့ပါသေးတယ်။ ကုလားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စာပေတွေအားလုံးကိုလည်း ဖျက်ဆီး မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ မွတ်ဆလင်ကို အတင်းအကျပ်ကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ အာရပ်တွေကအဲလောက်အထိ ဆိုးဆိုးရွားရွား လုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ကွဲစရာ အရှက်မရှိတဲ့အတွက် ကုလားတွေအရှက်မကွဲခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်ကုလားတွေက အာရပ်တွေကို စိတ်မနာပဲ အာ၇ပ်ကိုထိရင် လုံးဝ မခံဘူးဆိုတဲ့ အပြုအမူမျိုးကို ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကုလားတွေ ကျွန်စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ပုံကို ဆက်လက်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အထက်က ဓါတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။
အမေရိကန် CIA Drone လေယာဉ်ဟာ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ပါကစ္စတန် နယ်စပ်က ကုလားတွေကို ဗုံးကြဲ သတ်ဖြတ်နေတာပါ။ ပါကစ္စတန်အစိုးရကလည်း အဲလိုအပြုအမူကို ဝေဖန် ရှုပ်ချပါတယ်။ ဒီမိုသတင်းတွေမှာ အဲဒီ CIA လေယာဉ်ဟာ ဘယ်ကလာလဲဆိုတာ တစ်ခါမှ ထည့်မရေးပါဘူး။ (ပြောခဲ့တာရှိရင် ထောက်ပြပါ။ မှားရင်ပြင်ဖို့အသင့်ပါ) ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း အဲဒီလေယာဉ်ဘယ်ကလာလဲဆိုတာ သတိထားမိဟန် မတူပါဘူး။ အဲဒီလေယဉ်ဟာ ပါကစ္စတန် လေဆိပ်မှာပဲ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လေယဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ CIA ဟာ ကုလားတွေကို သတ်ဖို့ ကုလားမြေပိုင်နက်ထဲမှာ တပ်စွဲထားတာပါ။ ပထမပိုင်းမှာတေ့ ကုလားက drone သူတို့နယ်ထဲမှာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး လိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုမီဒီယာတွေတွေမှာလဲ ဟန်ပန်အပြည့်နဲ့ အမေရိကန်ကို အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ Google Earth မှာပေါ်လာတော့ ဒင်းတို့ ဖင်ပိတ်ငြင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံရရှာပြီ။ (သတင်းဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါဒန်.. ဒန်.. ဒန် ) ။ Taliban ဆိုတာကလည်း အမေရိကန် လက်နက်နဲ့ ငွေကြေးယူထားပြီး ပါကစ္စတန်ကို တိုက်ခိုက်နေတာကို ဘာမှ မပြောရဲဘူးလေ။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပါကစ္စတန်ကို ဖြိုခွဲမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ် CIA မှာရှိပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်အရ အမေရိကန် သံရုံးကို အဆမတန် တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတိုးချဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်းအသစ်တွေတွေရဲ့ တာဝန်ဟာ ပါကစ္စတန်အတွင်း ဗုံးခွဲ၊ လူသတ် လုပ်တဲ့သူတွေကို စည်းရုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အဖျက်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ခိုင်းပြီး ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်သက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (သံရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တွေ့ရတာ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ဒီမိုသမားတွေလဲ သတိထားပါ) ကုလားဆိုတာ အာရပ်တွေ မုဒိမ်းကျင့်တာ စိတ်မနာသလိုပဲ အမေရိကန်က ဗိုလ်ကျချင်တိုင်း ကျနေတာကိုလည်း လုံးဝကို မမှုပါဘူး။ ကျွန်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဘာမှ မပြောတဲ့ ခေါင်းငုံ့ခံနေတဲ့ အခါမှာ ဘေးက တရုပ်ကြီး ၀င်ရောက်ပြီး သတိပေးခဲ့ရပါတယ်။ (သတင်းဆောင်းပါး ) ကုလားဆိုတာ ကျွန်ခံရရင် ကျေနပ်တဲ့အမျိုးပဲနော်။
ကဲပါဗျာ။ . . . ကျုပ်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို ကျွန်ကုလားကိစ္စနဲ မပြီးစေချင်ဘူး။ ဒီကိစ္စပေါ်ကနေ စဉ်းစား တွေးခေါ်သင့်ပါပြီ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေက ကျွန်ကုလားတွေခံရတယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ ကျွန်ကုလားကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ အမေရိကန်ကိုလည်း ထောက်ခံလိုပါတယ်။ အဲဒါက မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထား မဟုတ်ဘူး။ အမေရိကန်နေရာကကြည့်ရင် ကျုပ်တို့ဟာ သူစိမ်းတရံတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ကုလားနဲ့ ကျုပ်တို့ကို တန်းတူမြင်မှာပါ။ အခုချိန်ကုလားတွေကို အနိုင်ကျင့်သလို ကျုပ်တို့ကိုလဲ မနှေးနဲ့ အမြန်ဆိုသလို အနိုင်ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ကို ဖြိုခွဲဖို့ ကြံစည်သလို ကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်အဲဒီရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ? အခုဒီမိုနဲ့ နအဖတွေလမ်းစဉ်အတိုင်း အမေရိကန် ဖင်ကိုသွားရက်ရင် အဆင်ပြေမလား? စဉ်းစားဖို့က ပါကစ္စတန်ကုလားတွေဟာ အမေရိကန်ဖင်ကို ရက်တာအကြမ်းဆုံးပါ။ ဒီနေ့အထိ အမေရိကန်ကို အပြစ်မပြောသေးပါဘူး။ ဒါတောင် အမေရိကန်က ကျွန်ကုလားတွေကိုသတ်ဖြတ်ပြီး ပါကစ္စတန်ကို ဖြိုခွဲနေတာပဲ . . . ဒါ့ကြောင့်ဖင်သွားရက်ရင်လည်း အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ရန်သူလိုသဘောထားရမှာလား? အဲလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံကို တည်မြဲချင်ရင် လမ်းဟောင်းအတိုင်းသွားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ကျုပ်တို့တွေ လမ်းသစ်ကို ထွင်ရမှာပဲ။ လမ်းသစ်က ဘာလဲ?
ကျုပ်တို့အမြင်ကတော့ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယအပါအ၀င် ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် အလိုက်သင့်ပဲ ဆက်ဆံစေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ကုလားတွေလို မဖားသင့်ပါဘူး။ ခပ်မှန်မှန်ပဲ ဆက်ဆံပါ။ အင်အားကြီးတယ်ဆိုပြီး မကြောက်ပါနဲ့။ ကြောက်ဒူးတုံနေရင် ဒူးညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်မယ် ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး။ ကျုပ်တို့ကို အကြောင်းရမယ်ရှာပြီး မတရားစစ်ကြေငြာနိုင်ပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် မီးစာ တစ်ဖက် ရေမှုတ် တစ်ဖက်မူကို သုံးသင့်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုပြီးတော့ ဆက်ဆံသွားရင်း စစ်ရေးအရ အဆင်သင့်ရှိနေရပါမယ်။ စစ်ဖြစ်ရမှာကို ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့။ လူဆိုတာ တစ်သက်မှာ နှစ်ခါမသေရဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင်တရွေ့ရန်ကိုရှောင်မယ်ဆိုပေမယ့် အတိုင်းအတာကိုကျော်လာရင် လုပ်သင့်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ရမှာပဲ။ နိုင်ငံသိက္ခာ၊ မြန်မာ့သိက္ခာကို ထိပါးလာရင် လက်ဦးမူယူပြီးတောင် ချသင့်ရင် ချရမယ်။ အဲလိုဖြစ်ဖို့အတွက် ကျုပ်တို့ စစ်အင်အားကောင်းမွန်ဖို့လိုတယ်။ စစ်အင်အားဆိုတာ စစ်သားငါးသိန်း ရှိနေလို့မလုံလောက်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေဘက်က ဘက်စုံ ပံ့ပိုးမှုရရှိမှဖြစ်မှာပါ။ ပြည်သူ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ထောက်ခံမှုရဖို့ဆိုတာ အဏာဥပဒေတွေနဲ့ လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာလဲ သတိထားပါ။ စစ်လက်နက်ဆိုတာကလည်း ပြည်ပကို အားကိုးလို့မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရမယ်။ အခုလက်ရှိ စစ်တပ်စက်ရုံတွေနဲ့ စစ်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေရုရှ ပို့ထားတဲ့ မူဝါဒကိုလဲ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်တစ်ခုတည်းကလုပ်နေလို့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ နည်းပညာကို အပြိုင်အဆိုင် ရှာဖွေပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရပ်ဖက်က စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေ၊ အသိပညာရှင်တွေရဲ့ ပါဝင်မှုတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ စစ်တပ်တစ်ခုတည်းကသာ လက်နက်တွေ ထုတ်လုပ်နေတာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်ပိုများတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းမှသာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီလက်နက်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ပြည်သူနဲ့ စစ်တပ် လက်တွဲမှသာ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရယူပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြီး မဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့ စစ်တပ်ပေါင်းတယ်ဆိုတာ ပြောရတာ လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီစကားက နအဖနဲ့ ဒီမိုတွေလဲပြောနေတဲ့ စကားပါပဲ။ လက်တွေ့ အကောင်အထည်တော့ မဖေါ်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? နအဖနဲ့ ဒီမို တွေဟာ ပြဿနာတွေကို ပူးပေါင်းအဖြေရှာဖို့ထက် မိမိဖက်ကို ကာကွယ်ပြီး တဖက်ကို လက်ညှိးထိုးအပြစ်တင်ဖို့ စိတ်အားသန်နေတယ်။ ကျုပ်တို့အမြင်ကတော့ တိုင်းပြည်အတွင်း နိုင်ငံရေးသမားတွေအပါဝင် စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူအကြား ရင်ကြားစေ့ဖို့ အဓိကလိုအပ်ချက်က ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်တွေ လူထုအတွင်းမှာ ရှိနေအောင် လုပ်ရမှာပါ။ စာနာစိတ်ရှိမှ ပြဿနာကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။
ကဲ.. စပြီးကိုယ်ချင်းစာနာကြည့်ရအောင်။ စစ်သားတွေအနေနဲ့ ကျုပ်တို့နေရာကနေ နေပြီးစဉ်းစားကြည့်လေ။ အခွင့်ထူးမှန်သမျှ ခင်ဗျားတို့ စစ်သားတွေကပဲ ယူနေတာ ကျုပ်တို့က ကျေနပ်နိုင်မလား? ဒီတော့ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက်ချင်စိတ် ဖြစ်မိမှာပဲ။ အဲလိုလုပ်ရင် အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းတယ်ဆိုပြီး စောက်တင်းပြောလို့ ဖြစ်မလား? လူဆိုတာ မိမိအတွက်အကျိုးရှိမှ ကောင်းကောင်းလုပ်မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား? ။ ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကလဲ စစ်သားတွေနေရာကနေ စာနာကြည့်လေ။ သူတို့တွေ မတရားလဒ်စားထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ ကားကောင်းကောင်းစီးပြီး တိုက်ကောင်းကောင်းဆောက်တော့ ကျုပ်တို့က ရှုံ့ချအပြစ်တင်ရမယ့်အစား မျက်နှာလုပ်နေတယ်။ မကောင်းမှုလုပ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေတာကို မြှောက်ပေးမှတော့ စစ်သားတွေ ပိုမိုလဒ်စားကုန်မှာပေါ့။ ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရမှာပါ။ မကောင်းတာကို အမှန်အတိုင်း ပြောဆိုသင့်တာပြောဆိုရပါမယ်။ ဆန့်ကျင်တဲ့စကားကို မပြောဆိုရဲရင်တောင် အားပေးတဲ့အမူအယာမျိုး မဖြစ်စေသင့်ဘူး။
ဒီတော့ စစ်သားနဲ့ ပြည်သူတွေ တန်းတူအခွင့်အရေး ဖြစ်ဖို့နဲ့ မြန်မာတွေ ဖြောင့်မတ်လာဖို့ဆိုတာ အတ္တစိတ် နဲ့ လောဘစိတ်ကို လျှော့မှဖြစ်မယ်။ အဲလိုဖြစ်လာရင် စစ်သားတွေဟာ ပြည်သူတွေကို အခွင့်အရေးတန်းတူပေးလိုမှာပါ။ ပြည်သူတွေကလည်း မတရားနည်းနဲ့ ချမ်းသာတဲ့ လူတွေကို ရှုံ့ချဆန့်ကျင် လာပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုစိတ်ထားကောင်းတွေ ၀င်လာဖို့ ဥပဒေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူး။ အပျင်းကြီးတာကိုတော့ အားမပေးပါဘူး။ အပျင်းကြီးပြီး ဆင်းရဲအောင်နေတဲ့ အစွန်းနဲ့ တချိန်လုံးအလုပ်မှာပဲ နှစ်မြုပ်ထားတဲ့ ကျိကျိတက်ချမ်းသာလိုတဲ့ အစွန်းနှစ်ခုကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစွန်းရောက်ချမ်းသာမူရဲ့ အပြစ်တွေကို မြင်လာအောင် ၊ အတ္တစိတ်နည်းလာအောင်၊ လောဘနည်းအောင်၊စာနာစိတ်ရှိလာအောင် စသည်တို့ကို ပညာပေးမှုတွေလုပ်ပေးခြင်းကသာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားသည် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးလမ်းစဉ်လို့ ခံယူထားတဲ့
China concerned over US embassy expansion
US drones spotted on Pak’s Shamsi airbase